TB 17 Sommar
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay khatar isqaadsiinta cudurka awgeed dadka kala talineysaa in ay si wadajir ah u safraan. Sidoo kale maskaxda ku hay in shirkadaha wax daabula ay yareeyeen tirada bixitaankooda iyo in ay soo rogeen xannibaado ku aaddan tirada rakaabka ee gaadidka raaci karta.
Laga billaabo 13 Juun dadka aan calaamado cudur lahayn Iswiidhan wey ku dhex safri karaan. Waa muhiim in dhammaan la raaco xeerarka in jir ahaan si sugan masaafo leesu jirsado, inta la safrayo iyo inta meel la joogo intaba. Inta aadan safrin, eeg degmada aad booqan rabtid sida ay tahay in loogu dhaqmo.
Wasaarada arrimaha dibaddu, UD, waxay dadka kala talineysaa safarrada aan ahayn lagama maarmaan ee lagu tegayo dalalka caalamka oo dhan. Laga billaabo 30 Juun meesha waa laga saaray kala talinta dadka ee aaditaanka waddamada:
Waddamada kale ee ka tirsan EU, EES iyo Schengenka, waa lagala talinayaa dadku in ay aadaan ilaa iyo 15 Luulyo. Waddamada kale waxaa dadka lagala talinayaa in aadaan ilaa iyo 31 Agoosto.
Uppdaterades 2 jul 2020 19:45